अनुवाद चेतावनी वेब पृष्ठ नील ভি फ्रिसबीको सन्देशहरू उनको सीडी प्रवचनहरूबाट ट्रान्सक्रिप्ट गर्न एक इमान्दार प्रयास हो।
ग्राफिक्समा बाइबल र स्क्रोल
भविष्यसूचक स्क्रोलहरू PDF
भविष्यसूचक स्क्रोल गालहरू
उपदेश पुस्तक नगेट्स
येशू चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ!
अनुवाद चेतावनी वेब पृष्ठ नील ভি फ्रिसबीको सन्देशहरू उनको सीडी प्रवचनहरूबाट ट्रान्सक्रिप्ट गर्न एक इमान्दार प्रयास हो। उद्देश्य मानिसहरूलाई यी प्रेरित सन्देशहरूसँग परिचित हुन अझ अवसरहरू सिर्जना गर्नु हो विशेष गरी ती व्यक्तिहरू जसले अडियो सीडी ढाँचाबाट प्रवचनहरू सुन्नुको सट्टा पढ्न रुचाउँछन्।
कृपया सूचित गर्नुहोस् कि यी सन्देशहरू प्रतिलेखनमा कुनै त्रुटिहरू मौलिक सन्देशहरूमा श्रेय दिन मिल्दैन तर ट्रान्सक्राइबिंग प्रयासबाट गल्तीहरू; जसको लागि हामी जिम्मेवारी लिन्छौं। हामी मानिसहरूलाई मूल सीडी सन्देश सुन्न प्रोत्साहित गर्दछौं।
मूल अडियो सीडी, डीभीडी र नील फ्रिसबीको पुस्तकहरू प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले संलग्न लिंकबाट नील फ्रिसबीको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्दछन् - www.nealfrisby.com साथै यी ट्रान्सक्रिप्शनको बारेमा प्रश्नको लागि हामीलाई हाम्रो सम्पर्क ठेगाना मार्फत सन्देशहरू पठाउँदछ।
साँच्चै हामी युगको अन्त्यमा छौं। यो महान राष्ट्र र सारा संसारमा सूर्य अस्ताउँदैछ। हामीलाई थाहा भएकै स्वतन्त्रताहरू चाँडै गायब हुनेछन्। यो साँचो सुसमाचारको साक्षी दिने क्षमता चाँडै बन्द हुँदैछ। यो राष्ट्र स्वतन्त्रता र परमेश्वरको साँचो वचन छनौट गर्ने अधिकारको लागि ठूलो सङ्घर्षबाट सुरु भयो। साँचो परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्ने सबै राष्ट्रहरूमाथि ठूलो सतावट आइरहेछ भनेर कसैले देख्न सक्छ। यस महिना हामीसँग यस ढिलो घडीमा साक्षी दिनुको महत्त्व ल्याउन भाइ फ्रिसबीको पुस्तकालयबाट विशेष उद्धरण हुनेछ। छिटो, छोटो र शक्तिशाली काम गर्नको लागि परमेश्वर आफ्ना जनहरूसँग हुनुहुन्छ, किनकि यो परीक्षाको घडी हो जुन धर्मशास्त्रले प्रायः उल्लेख गरेको छ। Rev. 3:10, "किनकि तपाईंले मेरो धैर्यको वचन पालन गर्नुभएको छ, म पनि तपाईंलाई परीक्षाको घडीबाट जोगाउनेछु, जुन सारा संसारमा आउनेछ, पृथ्वीमा बस्नेहरूलाई जाँच्नको लागि।" र अब नील फ्रिसबीबाट उद्धरण। यो साँच्चै फसल समय हो! हामीले येशूको लागि जे गर्छौं त्यो मात्र साँच्चै सधैंभरि रहनेछ। पृथ्वीका अन्य सबै चीजहरू नष्ट हुनेछन् वा हराउनेछन्! - "तर एक विश्वासी आत्मा भगवानको सामु बहुमूल्य छ! - यसले सायद धेरै सम्झनाहरू फिर्ता ल्याउनेछ, तर तपाईंले पुरानो सुसमाचार गीत 'Bringing In The Sheaves' सुन्नु भएको छ। - ठीक छ यो गर्न धेरै समय बाँकी छैन। - "चाँडै नै हरेक घुँडाले येशूको अगाडि निहुरनेछ र हरेक जिब्रोले धर्मशास्त्र अनुसार स्वीकार गर्नेछ! हामीले उहाँलाई देख्ने बेलामा हाम्रो साक्षी र आत्माहरूको उद्धार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनेछ! हामी प्रत्येकले गर्ने सबै कुरा उहाँलाई थाहा छ!” - "दिन धेरै बित्यो, सूर्य शून्य घण्टामा छ! रात हाम्रो तर्फ फैलिएको कालो छाया जस्तै आउँछ! आत्माको आग्रहले भन्छ, उज्यालो नभएसम्म काम गर। पाप र तानाशाहीको अन्धकार छिट्टै यस ग्रहलाई लिनेछ।" इसा। 43:10, "तिमीहरू मेरा साक्षीहरू हौ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, र मेरो सेवक जसलाई मैले चुनेको छु: ताकि तिमीहरूले मलाई चिन्‍न र विश्वास गर्न सक, र म नै हुँ भनी बुझ्‍न सक: मभन्दा अगाडि न त परमेश्‍वरको निर्माण भएको थियो, न त पछि हुनेछैन। म!" हामी राजमार्ग र हेजहरूमा जान बाध्यकारी बलको घडीमा छौं! भोजको निमन्त्रणा लगभग सकियो! - “परमप्रभुको वचन सुन। धेरै पहिले भविष्यवाणी गरिएको महासङ्कष्ट नजिकै छ। जसरी टाढाबाट बादल आउँदै गरेको देख्छ, त्यसरी नै आफ्नो सृष्टिकर्तालाई बिर्सेका मानिसहरूमाथि अचानक हुनेछ!” - विश्वासीहरूलाई उठाइनेछ र पृथ्वी अन्यायी र दुष्टहरूलाई सुम्पिनेछ! हामी त्यो घडीमा छौं जहाँ उहाँले भन्नुभयो, "उसले तुरुन्तै हँसिया हाल्छ, किनभने फसल आएको छ!" (मर्कूस ४:२९) यसले यो द्रुत, छिटो, छोटो काम हुनेछ भनी चित्रण गर्छ। जसरी उहाँले भन्नुभयो, "हेर, म चाँडै आउँछु।" - घटनाहरू देखाउँदै अचानक हुनेछ र चाँडै घट्नेछ! - संसारको लागि एक अप्रत्याशित आश्चर्य। र अचानक मूर्खहरूले थाहा पाउनेछन् कि चुनिएकाहरू गएका छन्! "त्यसोभए अब पछिल्लो वर्षाको फसलमा उहाँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, महत्त्वपूर्ण काम हुन थालेको छ!" पवित्र आत्माको बाध्यकारी शक्तिले प्रभुको अन्तिम सन्तानलाई ल्याउँदा हामीले हरेक दिन हाम्रो हृदयमा प्रार्थना गर्नुपर्छ। दुष्ट धर्मत्यागी चर्च र सरकारको बारेमा भविष्यवाणी पूरा गर्न संसार केही आश्चर्यजनक र अप्रत्याशित घटनाहरूको लागि जाँदैछ! यी विषयहरू र सुसमाचार कटनी कार्यको बारेमा, प्रभुले भविष्यवाणी पूरा गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँको निकटता पुष्टि गर्न सबै प्रकारका चिन्हहरू दिनुभएको छ! "आकाशले घोषणा गरिरहेको छ, समुद्रमा चिन्हहरू, पृथ्वीको ज्वालामुखीको आगोले पनि भविष्यवाणी गरिरहेको छ!" समुद्र गर्जिरहेको छ र पृथ्वी काँपिरहेको छ! धेरै राष्ट्रहरू आफ्नो बुद्धिको अन्त्यमा छन्। खतरनाक समय! तर हामी यो पनि जान्दछौं कि आर्थिक संकट पछि बाइबलले भनेको छ कि एक तानाशाहले विश्व समृद्धि र संरचनात्मक सहित ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ। (डान। ८:२५) – त्यसोभए हामीलाई थाहा छ एक रोमन राजकुमारको छाया पृथ्वीमा छ र उठ्न तयार छ! साथै महत्त्वपूर्ण घटनाहरू चाँडै र आगामी दिनहरूमा आउँदैछन्। निश्चित हुनुहोस् र भविष्यका दिनहरू हेर्नुहोस् किनकि परमेश्वरले युगको अन्त्यको बारेमा धेरै भविष्यसूचक चिन्हहरू देखाउँदै हुनुहुन्छ! - "उहाँका चुनिएकाहरूमाथि मध्यरातको रोएको छ।" - "पक्कै पनि यी सबै प्रत्येक क्रिश्चियनलाई शान्त र सतर्क बनाउन पर्याप्त छ। कतै संकेतहरूको लागि हामीलाई बताउनुहोस् कि उहाँ ढोकामा पनि हुनुहुन्छ! ” अन्त्य उद्धरण। यो पत्रले हरेक ख्रीष्टियनलाई साक्षी दिनको अत्यावश्यकता साँच्चै हामीमाथि छ र सबैले आफ्नो सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गराउनुपर्छ। यो महिना हामी भोल्युम नम्बर एक - मासिक पत्रहरूको पुस्तक (जुन 2005 देखि जुलाई 2008) साथै एक अद्वितीय डीभिडी, "जसले चाहानुहुन्छ" जारी गर्दैछौं। (तलको प्रस्ताव हेर्नुहोस्।) – सबै साझेदारहरूलाई विश्वास गर्नाले यो महत्त्वपूर्ण सन्देशको लागि उनीहरूको महत्त्वपूर्ण समर्थन जारी रहनेछ। यस सेवाको पछाडि उभिएका सबैलाई परमेश्वरले अद्भुत आशिष् दिनुभएको छ। यस मन्त्रालयलाई दिइएको सबै सहयोगको म साँच्चै कदर गर्छु। धेरै आत्माहरूलाई बचाइएको छ र यस ढिलो घण्टामा हामी बाँचिरहेका छौं भनेर सचेत गरिएको छ।
भिडियोहरू र अडियोहरू
शीर्षकमा क्लिक गर्नुहोस्
स्वर्ग र नरक को गवाही
रात चोरमा एक चोर
नील फ्रिस्बी सल्लाह
शट डाउन ईसाई च .्गाई चमत्कार
ग्राफिक्समा बाइबल र स्क्रोलको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
नील फ्रिसबीको भविष्यसूचक पुस्तकहरू
अब खण्ड I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX र X मा उपलब्ध छ
तपाईंको अद्भुत बुकलेटहरू अहिले नै सोध्नुहोस्!
पुस्तकहरू, CD र भिडियोहरूको लागि
यदि अफ्रिकामा हो भने, यी पुस्तकहरू र ट्र्याक्टहरूको लागि
वा कल गर्नुहोस् + २234 703०2929 २। २ २२२
वा कल गर्नुहोस् + २234 807०4318 २। २ २२२
"जब हामी गइसकेका छौं तब तिनीहरूले विश्वास गर्नेछन्।"
प्रतिलिपि अधिकार © 2020 अनुवाद चेतावनी थीम। सबै अधिकार सुरक्षित।
संग बनाइयो टियान सफ्टवेयर विकास कम्पनी